Home News Taliyihii Laga Soo celiyaya Kismaayo oo abaabul dagaal kawado Garbahaareey
Taliyihii Laga Soo celiyaya Kismaayo oo abaabul dagaal kawado Garbahaareey
Taliyaha cusub qeybta 43aad ee ciidanka Xoogga dalka Sareeyo Guuto Cali Maxamed Maxamuud oo ku sugan Magaalada Garbahaareey ee gobolka Gedo ayaa halkaasi ka wadda kulamo kala duwan oo uu la qaadanaayo Saraakiisha Ciidamada xoogga ee halkaasi ku sugan.
Taliyaha oo shalay gelinkii dambe gaaray Garbahaareey markii laga soo celiyay Magaalada Kismaayo, waxaa uu halkaasi ka bilaabay kulamo kala duwan.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada xoogga ee Gobolka Gedo ayaa xaqiijiyay in maanta taliyaha uu xilka kula wareegi doono Magaalada Garbahaareey.
Waxaa uu ka sheegay Jubbaland in uu ka bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah dagaalyahanada Al-Shabaab.
Taliyaha ayaa waxaa uu sheegay sidoo kale in isbadel lagu sameyn doono talisyadda Ciidamada xoogga ee ku yaalla degaanada maamulka Jubbaland.
Maamulka Jubbaland ayaa diiday taliyaha in uu kasoo degto Magaalada Kismaayo oo uu ku yaalla Taliska ugu weyn qeybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed.
Gen. Bagmadoow oo horey uga tirsanaan jirey ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, balse sanadihii dambe qurbaha ku maqnaa ayaa darajada jananimada loo dalacsiiyay bishii hore.
Previous articleMW Farmaajo oo caawa Beesha Caalamka qadka teleefanka ku canaanatay?
Next articleJubbaland oo fariin udirtay MW Farmaajo
Kenya and Djibouti dragged into Somalia’s electoral crisis
Madaxda Villa Soomaaliya oo lagu eedeeyay iney kaalin ku lahaayeen cunaqabateynta...